Maamulka Somaliland oo ogalaaday Shirka London Iyo Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles | Building Momentum
Maamulka Somaliland oo ogalaaday Shirka London Iyo Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles
Xukuumada Somaliland ayaa aqbashay in ay si rasmi ah uga qeyb gasho shirka dhowan ka furmaya magaalada London ee looga hadlaayo aayaha Somalia . Wasiirka arimaha dibada Somaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in ay ka qeyb galayan shirka London . Waxaa uu sheegay in ay shirkaas ay uga qeyb galayan sababo badan oo ay ugu horeyso in shirkas uu muhiimada gaara uleeyahay Somaliland , Sida dowlad caadi ah oo kamida dowlada ka soo qeyb galaya shirka ayaan uga qeyb galeynaa” “Waxa laga hadlayo waxaa ku jira qax yaabo badan oo inaga naquseeya sida amaanka geeska Africa iyo ladagalanka argagaxisada. Waxaan kaloo rabnaa in aan shirkas uga faa ideysano in aan madaxdda ka qeyb galeysa usoo bandhigno qadiyadeena aqoonsiga raadsiga ah ayuu yiri Maxamed Cabdilaahi Cumar. Waxaa uu sheegay wasiirka arimaha dibada Somaliland in intii aaney go,aankaan xukuumadu qaadan ay la kulmeen dhaman madxada xisbiyada mucaaradka ayna ubandhigeen la iskuna af gartay in laga qeyb galo shirkas si rasmi ah.
Ra’isul wasaaraha dowladda KMG Soomaaliya C/weli Maxamed Cali Gaas oo shalay shir jaraa’id ku qabtay safaarada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa beeniyay wararka sheegaya in Soomaaliya gumeysiga dib loogu celin doono, taasoo ka soo yeertay qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka KMG iyo shacabka Soomaaliyeed.
Mr. C/weli oo la weydiiyey su’aal aheyd waxa uu ka ogyahay qorshaha gumeysiga ee laga soo xigtay dowladda Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in dowladda Talyaanigu ay wax ka waydiiyeen arrimaha ay saxaafaddu qortay ee sheegaya in Talyaanigu ay soo jeediyeen in markale Soomaaliya la gumeysto arrintaasi oo uu sheegay in xukuumadda Talyaanigu ay iska fogeysay.
“Waxaan la kulmay Ra’isul wasaaraha Talyaaniga iyo qaar ka mid ah wasiirada Talyaaniga, waxayna ii sheegeen inaysan jirin qorshe noocaasi ah oo ay dowladda Talyaanigu wado, waxaan idiin cadeynayaa in Soomaaliya ay tahay dal xor ah oo aan marnaba gumaysi dib ugu laaban doonin, waxaa lagu jiraa qarnigii 21-aad” ayuu yiri Ra’isul wasaare Gaas.
C/weli Maxamed Cali ayaa dhanka kale ka hadlay shirka dabayaaqada bishan Soomaalida uga furmi doona magaalada London oo uu ku tilmaamay in ujeedka shirku yahay sidii beesha caalamka looga dhaadhicin lahaa inay taageero buuxda siiyaan tubta Road map-ka ee Soomaaliya looga saarayo marxaladda ku meel gaarka ah, wuxuuna yiri “Hal ujeedo ayaan u tagaynaa shirkaasi, waana inaan ka dhaadhicino beesha caalamka inay taageero siiyaan qorshaha Road map-ka, waana middaas keliya waxaan dooneyno oo ay dhammaan madaxda dowladdu isku raacsanyihiin”.
“Ma aqbaleyno in shirka London looga hadlo wax ka dhan ah Road Map-ka iyo go’aanadii ka soo baxay Garoowe, amaba la furo shir kale oo dowlad lagu soo dhisayo, waxa keliya ee aan taageeraynaa waa Road Map-ka in la hirgeliyo, wax intaasi ka baxsanna ma yeelayno” ayuu yiri Ra’isul wasaare Gaas.
2 thoughts on “Maamulka Somaliland oo ogalaaday Shirka London Iyo Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles”
Soomaaliland oo ka hadashay Mowqifkooda ku aadan ka qeybgalka Shirka London.
Maamulka la magac baxay Somaliland ayaa maanta sheegay inuu diyaar u yahay ka qeybgalka Shirka London oo 23-ka bishaan halkaasi uga furmi doono dhamaan dhinacyada siyaasada Soomaalida. Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Maxamed Cabdulahi Cumar oo wareysi siiyey BBC-da ayaa xaqiijiyey in dhamaan sadexda xisbi ee ka jira Somaliland iyo xukumada ay isku raaceen ka qeybgalka shirka London. Waxa uu sheegay in 80% ay taageersanyihiin shacabka Somaliland shirkaasi oo uu sheegay in ay u arkaan in ay fursad u tahay Somaliland si madaxda caalamka ee halkaasi isugu tageysa ay ugu gudbiyaan qadiyadooda ku aadan sidi ay u heli lahaayeen madax banaani. “Waxaa noo muuqata in shirkani uu muhiimad gaar ah iyo fursad gaar ah siinaya Somaliland, Somaliland waxay uga qeybgaleysa sifo la mid ah dalalka caalamka ee ka qeybgalays shirka, armaha xaga nabad galyada, la dagaalanka argagixisada iyo sidi mucaawino loogu heli laha Somaliland, iyo iyada oo Somaliland heleyso fursad ay dalalka caalamka ee ka qeybagalaya shirkaasi ugu bandhigi laheyd qadiyadeeda gooni isu taaga,” ayuu yiri. Dad badan oo kasoo jeeda Somaliland ayaa is weydiinaya sababta ay shirkan u aqbashay dowlada xilli dhamaan shirarki hore ee loogaga hadli jiray aayaha Soomaaliya ay qaadici jirtay. Wasiirka arrimaha dibada Somaliland ayaa dadkaasi ku qanciyey in uu ka duwanyahay shirkaan shirarki hore, Somaliland-na ay ugu jirto fursad ay ku gudbin doonto afkaarteeda dhinaca siyaasada. Dadka lafa gura siyaasada Soomaaliya ayaa sheegaya in shirka London uu yahay shir kaga duwan shirarki hore ka dhabeynta wax ka qabashada xaalada Soomaaliya iyo sidi markaan aduunyada ay hal wado ugu mari laheyd xoojinta dowlad Soomaaliyeed. Dalalka deeqda bixiya ayaa ku qasbay somaliland inay ka soo qeybgasho shirka London haddii kale la takoori doono, taasina waxay keentay inay aqbalaan ka qeybgalka shirka.